Gootummaan ummata magaalaa Masalaa adda - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Gootummaan ummata magaalaa Masalaa adda
Gootummaan ummata magaalaa Masalaa adda
Jiraattonni magaalotaa fi baadiyaalee Oromoo biraas ijoollee isaanii hidhaman hiiksisuu qaban
Qabsoon ummanni magaalaa Masalaa (Dhiha Harargee) itti jiru isa gootummaa addaati. Agaazii hin sodaanne. Ijoollee hidhaman hiiksisuu irraa tasa duubatti hin jenne. Jagnummaan isaanii hunda keenna boonse. Qaanqeen Xumura Gabrummaa marsaa biraa akka qabattu, faffacaatu taasise.
Ijoolleen kan hidhamanii fi dararamaa jiran jiraattota magaalaa Masalaa irraa qofaa miti. Gandi Oromoo hundi ilmaan isaa hidhaa fi du’aan dhabeera. Kan du’ee gumaa baasuun, isa hidhame ammoo hiiksisuun dirqama hunda keennaa mitii? Ummanni Masalaa eegaleera!
Oromiyaa keessatti kan nama saamuu fi nama buqqisu hin hidhamu. Kan nama ajjeesu yakka tokkoon hin gaafatamu. Kan hidhamu isa mirga isaaf dubbatu, isa haqa isaaf falmatu, isa mataa olqabatuudha. Barattoonni yunivarsiitota fi manniin barnootaa keessaa guuramaa hidhaman; hoogganoonni manniin isaanii keessaa guuramanii Qiliinxotti gataman yakka tokko hin hojjanne. Dararaa sadarkaa kanaaf kan isaan saaxile gootummaa fi jalala Oromooti. Ufii isaaniitii darara’amaa nu jiraachisuu, ufii beelayaa nu nyaachisuu, ufii madaayaa fayyaa keenna tiksuu filatani. Akka hedduu keennaa jilbiiffatanii fi afaan cuqqaalatanii jiraachuu ni danda’an ture. Garuu filannoon isaanii salphina baadhachuu hin turre. Namoota nama nugodhuudhaaf hidhamaa fi dararamaa jiran gadi lakkisiisuun dirqama Oromoo hundaati. Yeroonis itti laatamuu hin qabu. Ummanni Masalaa fakkeenna gaariidha, hunda keennaaf.
Previous articleJarmayaaleen Oromoo woliigaltee irra gayuun qabsoo Oromoo boqonnaa haarawa seensisa
Next articleLeenco Lataa: Who is in Control in Ethiopia?